Mogadishu Journal » “Salah wuxuu u qalmaa inuu ku guulesyto abaal marinta FIFA
Madaxweynaha (CAF) Ahmad Ahmad ayaa rajo weyn ka muujiyey inuu Mohamed Salah uu ku guuleysanayo abaal marinta FIFA The Best.
Ahmed wuxuu inta ku daray Salah haddii ay guusha raacdo “Guushaasi ma aha mid u soo hoyatay dalka Masar oo keli balse waxay sheraf weyn u tahay ayuu yiri qaaradda Africa guud ahaan”.
“Waxaa rajeenayaa in Mohamed Salah uu kaga guuleysan doono abaal marintan FIFA xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Luka Modrić”.
“Salah abaal marintan wuu u qalmaa marka loo fiiriyo waxqabadkiisa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu ka sameeyay kooxda Liverpool”.
Xidigaha Cristiano Ronaldo, Luka Modrić iyo Mohamed Salah ayuu xiriirka kubada cagta aduunka ay ku dhawaaqday inay isugu soo hareen tartanka abaal marinta xiddigga caalamka ugu ciyaar wanaagsan ee loo yaqaanno FIFA The Best.